Akhriso: Hindise Sharciyeedka La-dagaalanka Argagixisada Ee Golaha Shacabka Hor-yaallo – Goobjoog News
Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa September 23-keedii waxaa ay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hor-keentay hindise sharciyeedyo 15 ah uu ku jiro “Hindise Sharciyeedka La-dagaalanka Argagixisada”.
Hadaba, Goobjoog News, waxaa ay akhristayaasheeda u soo gudbineysaa hindise sharciyeedkaasi la filayo in uu wax ka badan ka badalo dembiyada lagu oogo dadka ku kacaya falal argagisixada ah.
Qeybta 1aad: Hordhac
Wa Amniga GudahaWaxay soo BandhigaysaaSharciga La-Dagaallanka argagixisadaoo ah side soo socata:
1) IN MARKASTA MAANKA LAGU HAYO: xuquuqaha qofka sida ku cad Dastuurka ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya;
2) IN MARKASTA LA AQOONSADO: xuquuqda eedaysanuhu leeyahay ee ku xusan qodobbada 34-aad iyo 35-aad ee Dastuurka ku-meel-gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya;
3) IN LAGA WAR QABO: xaqiiqada ah in argagixisadu ay halis ku tahay xasilloonida Soomaaliya, shaqeynta sharciga iyo xaqa muwaadiniintu u leeyihiin in ay si xor ah u noolaadaan iyo in ay nabadgelyo haystaan; dhabnimada in argagixisadu ay halis ku hayso nabadgelyada gobolka iyo tan dunida iyo in la aqoonsado baahida dhaqsaha ah ee loo qabo in la baaro dembina lagu oogo dadka ku kacaya falal argagisixo;
4) IN UJEEDDADU NOQOTO: in la adeegsado sharciga iyo tallaabooyin waafaqsan dastuurka si looga hortago in argagixisanimadu ku fiddo gudaha iyo meelaha ka baxsan Soomaaliya; iyo in kama dambaysta la cirib-tiro argagixisanimada; iyo
5) IYADOO XIL KA SAARANYAHAYWASAARADDAAMNIGA GUDAHA in ay soo saarto xeerkan iyo dib-u-eegista lagu sameynayo sharcigan taasoo loo gudbinayo Golaha Sharci-dejinta.
Qodobka 2aad: Ujeeddada Xeerkan
Xeerkan waxaa lagula dagaallamayaa argagixisada, waxaana lagu xakamaynayaa fal-dernbiyeedyada ka dhasha argagixisada, iyadoo caddaaladda lagu horgeynayo argagixisada lana dhawrayo sarraynta sharciga dalka iyo xuquuqda aadanaha.
Qodobka 3aad: “Fal Argagixiso”
d) In la abuuro xaalad halis ah oo saamaysa nolosha 1yo badbaadada dadweynaha ama qeyb kamid ah dadweynaha;
a) In handadaad loo geysto dadweynaha ama qeyb kamid ah dadweynaha; ama b) ku qasbo dawlad ama urur caalami ah in ay sameyso, ama ay ka waantowdo sameynta fal; ama
Qodobka 3aad: Koox argagixiso iyo hantideeda
1. “Koox argagixiso ah” waxaa loola jeedaa –
(a) cid ujeeddooyinkeeda ama hawlaha ay qabato ay kamid yihiin sarneynta, abaabulidda, ku-dhiirrigelinta, ku-qancinta fududaynta fulinta fal argagixiso; ama
“Hanti argagixiso leedahay”waxaa loola jeedaa –
(a) Dakhli iyo raasumaal loo adeegsado fulinta fal argagixiso;
Qodobka 4aad: Qeexitaanno kale
1) “lsgaars in“waxaa loola jeedaa xiriir lagu helay ama lagu gudbiyey boosto, taar,
telefoon, qaab internet elektaroonik ah ama xiriir kale oo lagu helay ama lagu gudibyey koronto, magnet, elektaroonik ama qaab kale.
2) “Bixiyaha adeegga isgaarsiinta“waxaa loola jeedaa qof bixiya adeegga gudbinta ama qabashada xiriirada.
3) “Cid” waxaa loola jeedaa qof, koox, iskaashato, shirkad, urur, sanduuq ama xiriir aan sharci ahayn.
4) “Aalad qaraxda ama wax kale oo wax dila”waxaa loola jeedaa:
a) \_Xlax qarxa ama hub olala ama aalad loo qaabeeyey oo itaal iyo awood u leh in ay sababto dhimasho, dhaawac jireed oo halis ah ama dhaawac la taaban karo oo soo gaara alaab; ama
b) Hub, ama aalad loo qorsheeyey ama loogu talagalay ama leh awood sababi karta dhimasho, dhaawac jireed oo halis ah ama waxyeello weyn oo soo gaarta alaab.
5) “Hay’ad-maaaliyadeed”waxaa loola jeedaa bangi ganacsi, ama hay’ad kastoo kale oo bixisa deyn, lacago hormarin ahaan u bixisa ama maalgelin ama aqbasha in lacago la dhigto iyadoo dadweynuhu dhiganayaan lacagahaas si ay ugu kaydsadaan ama ugu dirsadaan.
6) “Sagxad Sugan”waxaa loola jeedaa jasiirad la sameeyey, ama dhisme ku dhegan salka badda kaas oo u jeeddada laga leeyahayna tahay sahaminta ilaha ama ujeeddooyin kale oo dhaqaale.
7) “Agab kaabe ah”waxaa loola jeedaa agab kasta oo gaar loo leeyahay ama dadweynaha ka dhexeeya kaasoo loo adeegsado bixinta ama Qeybinta adeegyada dadweynaha loogu fa’aiidaynayo, sida biyo, bullaacado, tamar, shidaal ama isgaarsiin, jidad, gaadiid ay ku jiraan gegooyin diyaaradeed, adeegyo-maaliyadeed, bangiyo iyo adeeg kasta oo kale.
8) “Qof leh xasaanad”waxaa loola jeedaa:
a) Madax-dawladeed, oo ay ku jiraan xubnaha matalaya ee qabanaya hawl Madaxweyne dal kale marka la fiiriyo dastuurka Dalka ay khusayso, Madax• Xukuurnadeed ama Wasiiirka Arrirnaha Dibadda, diblomaasiyiin, mar kasta ooqof noocaas ahi uu joogo dal shisheeye, isaga iyo sidoo kale qoyskiisa ku weheliya safarka; ama
b) Qof kasta oo metala ama sarkaal-dawladeeed ama sarkaal kasta ama wakiil urur caalami ah oo dawlado ka dhexeeya ama wada leeyihiin kaasoo, goorta iyo goobta fal-dembiyeedka ka dhanka ah isaga rnarkii lagu fuliyey, dhismihiisa rasmiga ah, hoygiisa gaarka ah, ama gaadiidkiisa xaq u lahaa marka la fiiriyo xeerka caalamiga ah in uu helo ilaalin gaar ah oo laga ilaalinayo weerar lagu qaado isaga, xorriyaddiisa ama sharaftiisa, iyo sidoo kale weerar lagu qaado xubnaha ehelkiisa qeybta ka ah qoyskiisa.
c) Qof kasta oo dastuurka ku-meelgaarka ahi u aqoonsado inuu xasaanad dastuuri ah leeyah
9) “Naakhuude ama Kabtan” marka laga hadlayo doonyaha, waxaa loola jeedaa milkiilaha ama qofka (marka laga reebo mas’uulka dekedda ama naakhuudaha) waqtigala joogo ka mas’uul ah ama ka taliya doonta.
10) “Taageero la taaban karo Agab iyo Ilo”waxaa loola jeedaa hanti kasta, mid la taaban karo iyo mid aan la taaban karin, amaadeegaas oo ay ku jirto lacag ama wax lagu kala iibsado oo lacag iyo maaliyad la xiriira, goobo la seexdo, tababar, talo khibrad ku dhisan ama kaalmo, bakhaaro, dokumentiyo been abuur ah ama aqoonsi, agab isgaarsiineed, agabyo, hub, walax dilaa ah, walxo qarxa ama shaqaale.
11) “Wasiir”waxaa loola jeedaaWasiirka wasaaradda u xil-saaran Arnniga.
12) “Duuliye ama Hage” marka laga hadlayo diyaarad, waxaa loola jeedaa duuliyaha, milkiilaha ama qofka waqtigaas ka mas’uulka ah ama maamula diyaaraddaas.
13) “Raasamaa“l ama “Kayd” waxaa loola jeedaa hanti kasta noocay doontaba ha ahaatee, hanoqoto Mid maguuro ah ama guurto ah la taaban karo ama aan la taaban karin, sidii la doonaba halagu helo, iyo dokumentiyo sharci arna xeerar qaabka ay doonaanba ha ahaadeene kuwaasoo ay ku jiraan elektaronik ama sawir caddeynaya lahaansho ama dan, hantidaas oo ay ku jirto balse aanku koobnayn lacag caddaan ah, jeegagga safarka, jeegag, amarro lacag bixin, saamiyo, curaar, qoraal ballanqaad amrnaah iska-bixin, waraaq deymeed (LC) iyo wixii dul-saar, faa’iido, ama dakhli kale ah.
14) “Markabama doon’iwaxaa loola jeedaa gaadiidkasta oo loogu talagalay in meel lagu geeyo dad ama hanti iyadoo la adeegsanayo biyo (bad, webi iyo haro).
15) “Shay cayiman” waxaa loola jeedaa jiritaan khuseeya sida waafaqsan
Qodobka 30aad ee sharcigan.
16) “dhaawac jireed oo halis ah iyo waxyeello”waxaa loola jeedaa:
a)Dhaawac jireed oo daran;
b) Bur bur ballaaran oo soo gaara goob dadweyne, agab dawladadeed ama dal, kaabe, ama nidaamka gaadiidka dadweynaha, kaasoo ay ka dhalanayso khasaare dhaqaale; ama
c). Dhaawac weyn oo soo gaara degaanka, oo ay ku jirto hawada, ciidda, biyaha ama dhirta iyo xoolaha.
17) “Agab-dawladeed ama dal” waxaa loola jeedaa agab waara ama mid ku-meel-gaar ah oo uu adeegsado ama deganyahay wakiil dal, xubin Dawladeed, sharci-dejin ama garsoor ama saraakiil ama shaqaale-dawladeed
ama cid ama shaqaale urur dawlado ka dhexeeya iyaga oo u adeegsanaya arrimo la xiriira waajibaadkooda.
18) “Hub” waxaa ku jira qori, rniddi (haddii loo adeegsado fal argagaixiso), walax qaraxda, kimiko, mid bayooloji, ama hubka nukliyerka ah.
19) “Sarkaal” waxaa loola jeedaa sarkaal amni oo awood loo siiyey inuu baaro kana hawl-galo dembiyada argagixisada.
20) “Maxkamad Awood u leh” waxaa loola jeedaa Maxkamadda Gobolka.
21) ”Diyaar-garoow” waxaa loola jeedaa isu-diyaarin qorshayn iyo fulin fal argagixiso.
Qeybta 2aad -Fal-dembiyeedyada ama Xad-Gugudbyada
Qodobka 5aadd: “Fal-Argagixiso” Qof kasta oo:
a) u gays ta si ula-kac ah fal argagixiso sida ku qeexan qodobka 1 and ee sharcigan, oo keena dhaawac iyo dhimasho wuxuu mutaysanayaa dil sida ay qabaan diinta islaamka iyo xeerka ciqaabta Soomaliyeed ee dalka (XCS)
b) bilaaba, dhiirri-geliya, fududeeya, lacag ku bixiya ama kaalmeeya fulinta fal argag1xiso, wuxuu mutaysan doonaa xabsi muddo dhan 10 (toban) sano ilaa xabsi daa’im.
Qodobka 6aad: Haysashada walax ama walxo la xiriira argagixisoa) : Qof kasta oo isagoo og haysta walax abuuri karta tuhun macquul ah in waxa qofku haystaa ay tahay mid lala damacsan yahay arna loo haysto ujeeddooyin la xiriira fulinta, diyaar-garowga ama bilaabista fal argagixiso, qofkaasi wuxuu sameeyey xad-gudub lagu mutaysan karo ciqaab xabsi oo gaaraysa muddo 10 (toban) sano ah; iyo
b) Waxa difaac u noqonaya qof lagu eedeeyey xad-gudub marka la fiiriyo qodobkan ku jira faqradda (a) in uu caddeeyo in wuxuu haysto oo walaxda ahi aanay ahayn mid lala damacsanaa ama lala xiriirin karo fulinta, udiyaar garowga ama bilaabista fal-argagixiso.
Qodobka 7aad: Ururinta Xog
Qof kasta isagoo og:
(a) Ururiya ama qoraal ka sameeya, qoraalkaas oo ay ku jiraan sawiro ama elektaronik, oo ah xog nooceeda ay suura-gal tahay in ay faa’iido u yeelato qof raba in uu fuliyo ama u diyaarinaya fal-argagixiso; ama
(b) Haya dokumenti ama qoraal ay ku jirto xog loo adeegsan karo fal-argagLxiso, waxa qofkaasi sameeyey xad-gudubwaxaanu mutaysanayaa xarig muddo 5 (shan) sano ah,
(c) Difaac ayey qofka lagu eedeeyey xad-gudubka u noqonaysaa marka la fii.riyo Qeybtan in uu caddeeyo in uu sabab macquul ah u haysto (ururinta) ama haysashada.
Qodobka 8aad: Diyaar-garow
Qof kasta oo ku lug leh, sida ay doontaba ha noqotee, diyaar-garowga fulinta fal• argagixiso si ula-kac ah wuxuu noqonayaa mid sameeyey fal-dembiyeed waxaanu mutaysanayaa xabsi muddo gaaraysa 4 (afar)ilaa 10(tobon) sano.
Qodobka 9aad: Hagidda fulinta fal argagixiso
Qodobka 10aad:, Xubin Ka-noqoshada Koox Argagixiso
1. Qof kasta oo isagoo og xubin ka ah, ama sheega in uu xubin ka yahay urur argagixiso ah wuxuu qofkaasi sameeyey xad-gudub waxaanu, marka lagu caddeeyo ka dib, mutaysan doonaa qofkaasi xabsi muddo dhan 5 (shan) ilaa 10 (toban) sano.
\_Vaxaa difaac u noqon kara qofka lagu eedeeyey xad-gudub marka la fi.iriyo faqradda (1) ee Qodobkan in uu caddeeyo in cidda lagu eedeeyey uu xubin ka yahay aanay ahayn urur argagixiso goorta ama taariikhda uu isagu ama iyadu xubin ka noqotay ama sheegtay in uu xubin ka yahay ciddaas, iyo in aanu isagu ama iyadu wax qeyb ah ka qaadan hawlaha ciddaas, markii ay noqotay urur argagixiso ka
3. Marka la go’aaminayo in qof xubin ka yahay urur argagixiso iyo inkale, maxkamaddu waxay tixgalin kartaa arrirnahan soo socda:
a) Haddii ay jirto sabab macquul ah oo lagu aamino in qofka la dacweeyey uu u hanqal taagayo mabaadi’da kooxdaas argagisida ah;
i) b) Haddii eedaysanuhu isagoo og uu ka helay lacag ama agab urur argagixiso ah;
ii) c) Haddii eedaysanuhu uu qaatay magaca, midabka, astaanta, luqadda, calaamadda ama wax kale oo matala lalana xiriiriyo urur argagixiso; iyo
iii) d) Haddii eedaysanuhu isagoo og xiriir la yeesho xubno la ogyahay oo ka tirsan urur argagixiso ah.
Qodobka 11aad: Qorista Dad Xubno Ka-noqda Kooxo Argagixiso ama Ka-qeyb qaata Falal-argagixiso
Qodobka 12aad: Bixinta ama Helidda Tababar Argagixiso (tababare iyo la tababare) Qof kasta oo isagoo og:
(i) b) adeegsiga qaabkasta ama hab kasta oo loo sameyn karo wax kasta oo kale oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay fulinta ama fududaynta fulinta fal• argagixiso; ama
(ii) c) sameynta layliyada milatari ama dhaqdhaqaadooda; isagoo og waqtiga uu bixinayo tilmaamaha ama tababarka in qofka uu siinayo tilrnaamaha ama tababarku uu rabo in uu u adeegsado xirfadahaas loo tilmaamay ama lagu tababaray arrimo la xiriira argagi.xiso ama uu rabo in uu ku fuliyo fal• argagixiso ama uu ku kaalmeeyo fulinta ama u diyaarinta dad kale inay fuliyaan fal noocaas ah ama xad-gudub, qofkaasi wuxuu sameeyey xad• gudub wuxuuna mutaysanayaa xabsi muddo u dhaxaysa 10 (toban) sano ilaa xabsi daa’im iyadoo garsooruhu uu tixgalinayo xaaladaha dambiga fududeeya ama cusleeya ee Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.(XCS)
2) Qof kasta oo hela tilmaamo ama tababar nooc kasta oo kamid ah xirfadaha lagu xusay faqraddal”ad(a) ee sare isagoo waqtiga uu tilmamaha ama tababarka qaadanayana ujecddadiisu tahay in uu u adeegsado tilrnaamahaas la siiyey fal• argagixiso ama arrimo la xiriira fulinta ama u diyaar-garowga falal argagixiso ama ugu kaahnaynta kuwa kale in ay fuliyaan falal noocaas ah qofkaasi wuxuu galay xad• gudub, wuxuuna mutaysan doonaa xabsi muddadiisu dhan tahay 10 (toban) sano ilaa xabsi daa’im.
Qodobka 13aad: Abaabulka ama Dhiirri-gelinta Fulinta Pal Argagixiso
1) bixiya tilmaan ama tababar ku saabsan xirfad, xirfadahaas oo ay ku )ltaan balse aan ku koobnayn –
(i) b) adeegsiga qaabkasta ama hab kasta oo loo sameyn karo wax kasta oo kale oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay fulinta ama fududaynta fulinta fal• argag1xiso; ama
(ii) c) sa.tneynta layliyada milatari ama dhaqdhaqaadooda; isagoo og waqtig-a uu bixinavo tilmaamaha ama tababarka in qofka uu siinayo tilmaamaha arna tababarku uu rabo in uu u adeegsado xirfadahaas loo tilmaamay ama lagu tababaray arrimo la xiriira argagixiso ama uu rabo in uu ku fuliyo fal• argagixiso ama uu ku kaalmeeyo fulinta ama u diyaarinta dad kale inay fuliyaan fal noocaas ah ama xad-gudub, qofkaasi wuxuu sameeyey xad• gudub wuxuuna mutaysanayaa xabsi muddo u dhaxaysa 10 (toban) sano ilaa xabsi daa’im iyadoo garsooruhu uu tixgalinayo xaaladaha dambiga fududeeya ama cusleeya ee Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.(XCS)
2) Qof kasta oo hela tilmaamo ama tababar nooc kasta oo kamid ah xirfadaha lagu xusay faqraddal””d(a) ee sare isagoo waqtiga uu tilmamaha ama tababarka qaadanayana ujeeddadiisu tahay in uu u adeegsado tilmaamahaas la siiyey fal• argagixiso ama arrimo la xiriira fulinta ama u diyaar-garowga falal argagixiso ama ugu kaalmaynta kuwa kale in ay fuliyaan falal noocaas ah qofkaasi wuxuu galay xad• gudub, wuxuuna mutaysan doonaa xabsi muddadiisu dhan tahay 10 (toban) sano ilaa xabsi daa’im.
Qodobka 13aad: Abaabulkaama Dhiirri-gelinta FulintaFal Argagixiso
Qodobka 14aad: Fulinta ‘Shirqool’ Xad-gudub ku ah Sharcigan
(3) \_'(i’uxuu qofkaasi sameeyey xad-gudub uu ku mutaysanayo ciqaab xabsi oo u dhexeeya 2 (labo) ilaa 5 (shan) sano.
Qodobka 16a•d: Waajibka In La Daah-Furo Xogta La Xiriirta Xad-gudubyada ama Falalka Argagixiso
1. Qof kasta oo haya xog gacan ka geysan karta in:
2. Ma jiro wax ku jira faqradda laad ee qodobkan oo khasab ka dhigaya in la daah- furo xog dhawrsan.
4. Qof kasta oo u hoggaansami waaya faqradda 1 and ee xeerkani wuxuu sameeyey xad-gudub, wuxuuna mutaysan doonaa xabsi muddo aan ka badnayn ilaa 3 (saddex) sano.
Qodob 17aad: In Loo Raadiyo Arna La Siiyo Taageero Kooxo Argagixiso Si Loo Fuliyo Fal Argagixiso
3. Qofkaasi wuxuu sameeyey xad-gudub, wuxuuna mutaysan doonaa xabsi u dhaxeeya 10 (toban) sano ilaa xabsi daa’im.
Qodobka 20aad: Xad-gudubyada ka dhanka ah badbaadada duulimaadyada rayidka ah
Qodobka 21aad: Xad–gudubyada ka dhanka ah badbaadadagaroornadau adeega duulirnaadyo rayid ah
in la burburiyo ama si aad ah loo waxyeeleeyo agab uu leeyahay garoon
waxa lagu mutaysan doonaa ciqaab xabsi oo 15 ilaa 30 (shan iyo toban ilaa soddon) sano ah.
Qeybta 3aad: AwoodahaBaarista
Qodobka 22aad: Hor–qabatayntalagu sarneeyo adeegga isgaarsiinta
1. Iyadoo loo eegayo arrimaha soo socda ama marka ay cidi codsi uga gudbiso
2. Haddii dhaqso loogu baahdo, waxaa oggolaanshaha saxiixi kara saraakiisha ku xusan qodobka 21 and faqraddiisa s= balse waa in uu 24 saac gudahood ku oggolaado garsoore maxkamad gobol.
Oggolaansho hor-qabatayn isgaarsiineed waxaa lagu bixin karaa oo keliya haddii Mas’uuliyiinta hoos ku cayiman ama magacooda lagu soo codsado:
6) Codsiga waa in lagu qeexo tihnaanta xiriirada la rabo in hor-qabatayn lagu sameeyo, faahfaahinta cidda adeegga bixisa iyo sharaxaad ku saabsan sababta hor-qabatayntaasi muhiim u tahay. Codsiga waa in sidoo kale lagu daro ballan qaad in wixii lagu helo hor-qabatayntaas loola macaarnilayo hab waafaqsan Qeyb• hoosaadka 11 iyo 12 ee hoose.
Qodobka 23aad: AwoodahaXirista
Qodobka 24aad: Xarigga iyo Amarkaxabsi-u-gudbin
b) Baarista lagu sarneeyey qofka arrintu khusayso ay tahay mid loo sarneeyey si wanaagsan oo dhaqso 3) \_Xfaqti kasta oo baaris lagu sarneynayo qofka la tuhunsan yahay si loo dhammeystiro baarista waxay noqon doontaa ugu badnaan 90 (sagaashan) maalrnood, iyadoo shuruuddu tahay in wadarta tirada rnaalmaha la haynayo qofka inta aan dacwad lagu soo oogin aanay ka badnaan karin 90 (sagaashan) rnaalrnood, haddii aan rnuddo• kordhin laga helin maxkamad awood u leh. Toddobaad kasta waa in maxkamadda lagu wargeliyaa halka dacwaddu marayso, iyadco maxkamadda laga codsan karo muddo-kordhin macquul ah.
Qodobka 25aad:Qaadista Astaamaha Faraha iyo Muunadaha
Muunadahan soo socda waxaa laga qaadayaa qofka la tuhunsan yahay, hab waafaqsan faqradda 2″”d ee sare:
7. Haddii oggolaanshaha qaadista muunadda ku xusan faqradda 4 nod ee sare la diido
Qodobka 26aad: Hubinta Dekadaha iyo Xuduudaha
(b) markab dushiisa ama diyaarad codsi ka soo gudbistay meel kasta oo kamid ah
Soomaaliya gudo iyo dibad kii uu doonaba; iyo
2. Sarkaal amni wuxuu adeegsan karaa awoodihiisa ku xusan qodobkan ha u muuqato arna yaanay u muuqan sabab uu uga shakin karo in qofkaasi xiriir la leeyahay sameynta, diyaarinta ama fududaytnta fal argagixiso.
3. Qofka lagu wareystay hab waafaqsan Qodobkani waa in uu:
4. Qofka lagu xiray hab waafaqsan faqraddani, haddii aan awood kale lagu xirin, waxaa lagu sii dayn doonaa muddo aan ka badnayn 9 (sagaal) saacadood marka laga bilaabo goortii hubintiisu bilaaba
5. Si uu isaga qanciyo in ay jiraan dad uu rabo in uu su’aalo weydiiyo hab wafaaqsan faqradda kowaad ee sare, sarkaalka hubintu wuxuu baaris ku sameyn doonaa:
6. Sarkaalka baaraha ah ee su’aal weydiiya qofka hab waafaqsan faqradda 1 and ee sate, wuxuu si uu u go’aamiyo in uu yahay qofka ku lug lahaa diyaarinta, fulinta ama fududaynta falka argagixiso:
Qeybta 4aad – Awoodaha Dheeriga ah iyo Xeerarka Isku-Dhafan
Qodobka 28aad: La-wareegidda markii dembi lagu helay : Haddii cid hab waafaqsan Sharcigan loogu soo oogo dembi, laguna xukumo si kama dambays ah, Maxkamaddu waxay amar ku bixin kartaa in hanti kasta oo loo adeegsaday qaab la xiriira argagixiso ama lagu helay dembigan fulintiisa ama abaal-gud ahaa fulinta dembigaas, in lagu wareejiyo dawladda. Maxkamaddu amarkan ma bixinayso iyadoo aan la sameyn baaris macquul ah oo lagu sameynayo hantidaas iyadoo aanay maxkamadduna sameynaynin amar noocaas ah,sababta oo ah maxakamadda oo aan siinin fursad lagu dhegeysto qofkii dani uga jirtay (wax ku leh hantida si taos ah iyo si dadbanba).
Qodobka 3oaad: Xanibaadda Hantida
3. Amar la bixiyey iyadoo la adeegsanayo Qodobkan wuxuu:
4. Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka wuxuu: (a) Ogaysiis ka siin doonaa amarka:
5. Amarka lagu bixiyey hab waafaqsan Qodobkan, waxay muddadiisu ku egtahay 30 (soddon) maalmood laga bilaabo markii amarka la bixiyey, haddii aan maxkamadda awoodda u leh, intii ay dhegeysatey dhinacyada ka dib, aanay amar kale bixin oo sidaas ka duwan.
1. Haddii wasiirka wasaaradda u xilsaaran amniga gudaha uu hayo sabab macquul ah oo uu ku aamino in koox mucayan ahi ay ku lug leedahay hawlo argagixiso, wuxuu, isagoo cuskanaya xog sugan oo ay u soo gudbiyaan taliyeyaasha hay’adaha amniga Soomaaliyeed, isagoo wargelinaya cidda ay khusayso, wuxuu ku dhawaaqayaa in kooxdaasi tahay koox argagixiso ah iyadoo la raacayo Xeer
Qodobka 32aad: Oggolaanshaha Guud Ee Adeegsiga Nuqullada
Qodobka 3yad:Caddeyn Shahaado
Qodobka 34aad:ln La Oggolaado Caddaymaha Elektaroonki ada ah iyo
1. Habraac ama fal-dembiyeed kasta ee ku saabsan Sharcigan, caddeynta elektaroonikada ah iyo hababka baarista waa la oggol yahay in loo soo bandhigo caddeyn ahaan iyadoo shuruudduna tahay in rsooruhu ku qanco caddeyn-nimada maragga lagu caddeeyey hubin ama tasdiiqin af ah ama qoraal ah oo laga helayo qof aqoon toos ah u leh qaabka caddeyntaa lagu abuuray ama markhaati loo tixgeliyo in uu khabiir ku yahay takhasuskiisa.
3. Haddii laga dhaliyo caddeynta qalab elektaronik ah ama mid gacmeed, marka la caddeeyo in qalabkaasi “xaalad shaqo oo caadi ah” ku suganyahay, waxa loo arki doonaa, ilaa inta laga caddeynayo taa lidkeeda, in uu ku sugnaa xaalad shaqo oo wanaag-san marka la fiiriyo xaaladda ay khusayso .
. Qodobka 35aad–Awoodda Qaadista Dacwadaha Xeerkan:
1- Maxkamadaha rayidka ayaa leh awoodda qaadista dacwadaha ka dhasha fal•
dernbiyeedka argagaxisada ee uu Xeerkani tilmaamayo.
Qodobka 36aad: Baabbi’in
Qodobka 37aad: Dhaqan-gal
Hindise sharciyeedka waxaa uu soo maray heerar kala duwan, marka uu golaha shacabka ka dhammaadi waxaa lagu wadaa in aqalka sare mar kale ka doodaan si loogu gudbiyo madaxweynaha.
Goobjoog News, Lama Qaadan Karo Xigasho La’aan
Muqdisho: Qarax Booliisku Dhaheen Waa Laga Hortagay Oo Ay Ku Dhinteen 17 Qof
Wasiir Hore Oo Ku Geeriyoodey Muqdisho
Hindise Sharciyeedka La-dagaalanka Argagixisada
asiga oo PDF ah ma heli karaa,
Haddii aad ila wadaagi kartaan Gacalabuukar@gmail.com
buy viagra online usa viagra generic wholesale australian ph...
homework for pre k help me to write a poem writing a researc...
buy canada viagra order pfizer viagra where can you buy viag...
Amoxicillin Dosage For Puppy Zikepe [url=https://dcialish.co...
student research paper cheap dissertation help pay for essay...